Dharka digniinta clothing Dharka xayaysiiska ah • Dawaarka kumbuyuutarka P&M
Dharka digniinta xayeysiinta ah ayaa badanaa loogu talagalay goobaha shaqada iyo meelaha caamka ah. Kamizelki Waxaa sidoo kale doorta qabanqaabiyaasha qaar ka mid ah dhacdooyinka isboorti ama naadiyo, gaar ahaan halka ay ka qeybgalka dhacdadu tahay barxadda guud, sida isu soo baxa bushkuleeti ama maratoonka orodyahannada.
Dhar muuqaal sare leh oo shaqo iyo isboorti ah
Inaga dukaan bogga calaamadahaDharka xayeysiinta - dharka digniinta ah”Waxaan bixinaa moodello leh halbeegyo waxqabad ku habboon, taas oo ay ugu mahadcelinayaan taas oo ay ku hayaan howlahoodii asalka ahaa muddo dheer, iyagoo gacan ka geysanaya kordhinta muuqaalka xilliga fiidkii iyada oo ay ugu wacan tahay karbaash ka tarjumaya.
Waxaan u adeegsannaa tikniyoolajiyad casri ah si aan u abuurno daabacado, maxaa yeelay waxaan dooneynaa inaan hubinno, marka lagu daro amniga, muuqaal soo jiidasho leh, laakiin sidoo kale adkeysi kordhay.
Dharka muuqaalka sare leh, waxaan inta badan siinaa jaakadaha ka tarjumaya kaliya dadka waaweyn ee noocyada unisex, laakiin sidoo kale carruurta. Moodooyinka la heli karo labadaba waa la dhejiyaa oo madaxa ayaa la saaraa. Culeyskooda fudud awgood, way fududahay in la isticmaalo. Waa la ii isticmaali karaa cimilo kasta, xagaaga iyo jiilaalkaba. Waad ku mahadsan tahay sifooyinkeeda, maaddadu waxay ku habboon tahay adeegsadaha, taas oo u oggolaanaysa iyaga in si fudud loogu daro hoodie, jaakad ama shaarka polo.
Qiimaha tartanka, naqshad shaqsiyeed
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn waa tartan qiimo jaban. Hirgelinta mashruuca ka dibna soosaarkiisa qiime jaban awgood waxay jawaab gaar ah u noqon doontaa kuwa daneeya qiimo jaban ama miisaaniyad yar haysta.
Naqshadeynta iyo tolida xayeysiinta dharka digniinta ah Maaha inay ku kacdo hanti aad u tiro badan, taas oo la hubo inay ka farxin doonto kuwa miisaaniyaddu adag tahay.
Suurtagalnimada calaamadeyn dheeri ah oo dharka leh daabacaadda kumbuyuutarka lub daabacaadda shaashadda ogolaan doonaa shaqsiyeyn shaqsiyeed.
Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay marka isticmaalaha uu ka mid yahay wakiillada shirkadaha kale ama hay'adaha - tusaale ahaan inta uu ka shaqeynayo goobta dhismaha ama bakhaar ay qandaraaslayaal qandaraaslayaal ka yihiin shirkado kala duwan ay ka shaqeeyaan ama inta lagu jiro dhacdooyinka isboortiga oo ay ka qaybgalayaal badan oo matalaya hay'ado kala duwan ay ka qayb qaataan. U adkaysiga xoqiddu waxay ka dhigan tahay inay sii ahaanayaan muddo dheer. Tayada noocan oo kale ah waxay saameyn togan ku yeelan doontaa aragtida sumadda.
dhidid dhidid shidan oo milicsanayajaakadajaakada digniintafunaanad milicsigajaakad milicsigadigniinta dharka ilaalintadharka muuqaalka sare lehdharka muuqaalka sare ee esrodharka muuqaalka sare lehmuuqaalka sare ee ciop dharkadigniinta dharka darawaladamuuqaalka sare dharka muuqaalka saredhar muuqda oo muuqaal muuqda lehdharka dhogorta ee muuqaalka sare lehsoosaaraha dharka muuqaalka sare lehdharka-muuqaalka sare warsawdharka muuqaalka sare leh daabacdharka shaqada ee muuqaalka sare lehdharka shaqada muuqaalka sare leh3m cajalad digniin dhar ahcajalad digniin ah oo milicsiga dharka 3m